ISIBONELO ukukhululwa. Indlela ukubhala umbiko wephephandaba owakhishwa e
zokuxhumana Isakhiwo exhumanisa kithi akunakwenzeka ukuba sicabange ngaphandle ithuluzi ezifana a ukukhululwa press. Kuyinto umyalezo abezindaba uhlamvu ulwazi. Isimemezelo Kwabezindaba ibhalwe futhi kusakazwe kulezi zimo ezilandelayo:
Kuvulwa inkampani, inkampani ephethwe inkampani noma ukunwetshwa ukukhiqizwa.
Ingabe ubamba umcimbi yenkampani.
Lo mcimbi, okwenzeka ngo-izwe noma umkhakha, kudinga ukusabela ukuphathwa phezulu.
Inhlangano wathola imiklomelo noma babe nezinye impumelelo enkulu.
Sekube ebalulekile izinguquko izisebenzi.
Endabeni force majeure kanye nezimo eziphuthumayo.
Ezimweni ezinjalo, ukukhululwa press kungadalwa ngaphambi nangemva umcimbi ezifanele. Kulo mBhalo, ke uyothwala ulwazi, kunokuba ekumemezeleni uhlamvu.
Cindezela release - kuyini?
Isimemezelo Kwabezindaba kuyinto ebaluleke Imininingwane umlayezo izintatheli, inhloso okuyinto ukuthumela - the nokugqugquzela abezindaba nesithakazelo esikhulu kule ndaba described ukushicilelwa okwengeziwe lwezihloko ezisekelwe kulo. Isibonelo ukukhululwa press kulotshiwe ku ukukhululwa imodeli entsha imoto, ingaqukatha ulwazi mayelana izimo zawo futhi ithumela izincwadi ncwadi eminye (esimweni esinjalo, uma isihloko kubonakala olufanele abafundi).
Ukukhululwa press ayisona incwadi ukukhangisa, ngakho isinqumo ukuyikhulula cindezela kuthatha umhleli kuphela. Uma umyalezo iqukethe luyingxenye commercial izakhi ukushicilelwa siyodlula esigabeni ukukhangisa, futhi icala ngendlela efanele.
Yini ukukhishwa ukubhala?
Ukubhala umbiko wephephandaba owakhishwa e kuyasiza uma isenzakalo banxuse abezindaba uyavuza. Ngoba nje inkampani has a chance okusezingeni eliphezulu ukuba zibonakala emaphephandabeni, ku-intanethi noma kuthelevishini.
Isibonelo esimangalisayo umbiko wephephandaba owakhishwa e ukuheha abezindaba ukunakwa futhi wabangela igagasi izincwadi, - izenzo angajwayelekile inkampani "Euroset", kuhlanganise ukwabelana lapho kwakukhona izingcingo "ukuze Khumulani uthole cell", njalo njalo. Ibhizinisi elikhulu kulula kakhulu, ngoba abezindaba ngokwabo ukufuna izaba ukugqamisa izinhlelo zabo izimpikiswano ezihlobene nemisebenzi yabo.
Yini isitayela ubhala isihloko esifana nalesi?
Genre ubhala umbhalo adedelwe ulwazi, kungakhathaliseki ububanzi futhi ngezinga kwenhlangano. Nokho, musa overload amagama umbhalo ibhizinisi. Umniningwano loniketwe ukukhululwa press, ngokungafani kuya izincwadi zokukhangisa kumele kube njengoba inhloso ngangokunokwenzeka.
I izejwayezi "Mina", "thina" akulungile. Umbhalo kufanele futhi ngokomzwelo ezinemibala. Qiniseka kabusha efundwe wakho ngaphambi kokuthumela, ngoba kokukwazi kanye nokwaziswa okuqukethwe ngeke kakhulu zincike isithombe yenkampani.
Indlela ukubhala umbiko wephephandaba owakhishwa e for ukuthumela ku-inthanethi?
Lapho ebhalela ukukhululwa kufanele nigcine ezithile ulwazi isakhiwo ofana mbhoshongo, nabokhulumile up base ekuqaleni lobeka amaqiniso abalulekile kakhulu.
Ikhipha ukukhululwa press kufanele libe izingxenye ezilandelayo:
Isihloko ukukhululwa press.
isigaba yesingeniso, ukubizwa ngokuthi "abaholayo."
Main sihloko umzimba.
Izikhombo futhi imininingwane yokuxhumana (bekgraundera).
izixhumanisi ezisebenzisekayo ukuze umfundi (uma kushicilelwa kusayithi Inthanethi).
Le ngxenye ibonisa lonke iphuzu woyekelo, uchaza isenzakalo ukuthi lokho kuyokwenzeka. Isihloko kufanele kusishukumisele futhi aqukethe akukho kweziyisishiyagalombili amazwi, futhi kube sobala futhi abalulekile. Abantu abaningi abanamakhono belulekwa ukuba abhale emva zokubhala umzimba sihloko.
Regulations ukuhlinzekela umbiko wephephandaba owakhishwa e ubhala isihloko esikhulu sephephandaba i ngokugqamile futhi font emikhulu. Igama lokuqala kufanele kubhalwe ne ngafeleba (asikho isidingo ukwenza zonke ngosonhlamvukazi). Kungcono ukusebenzisa sikhathi samanje ngaphandle izihloko ezengeziwe.
Kuyadingeka ukuthi isihloko eliqukethe sihloko elisemqoka. Lokhu kuzosiza ukuthuthukisa imiphumela impahla ukukhululwa, kanye ukwenza kube lula ukuqonda okushiwo izintatheli.
Cindezela ukukhululwa mayelana ezingeni efanele lomcimbi kumele kubhalwe ku inkampani okubhala futhi ube okunenjongo futhi luthandeke isihloko izintatheli. Esigabeni sokuqala kufanele baphendule imibuzo: yini, kuphi, nini futhi ngayiphi injongo oyokwenziwa.
I zindima ezilandelayo kufanele sithwale umthwalo traffic, aqukethe ulwazi mayelana umcimbi noma umkhiqizo izici, endaweni yalo emakethe. Umbhalo kufanele ibe njengoba eziningi amaqiniso. Kulesi iyunithi ungafaka amazwana Directorate of inkampani.
Ngakho, isibonelo umbiko wephephandaba owakhishwa e ezibhaliwe mayelana izenzakalo kushicilelwe incwadi kanje.
Isihloko: "Publishing" angavamile "kudedela incwadi entsha kumnandi isikhathi sokuhamba." Khona-ke, bese kuthi umusho wokuqala kufanele: "Publishing" angavamile "namuhla ikhiphe incwadi entsha akukhuthazwa umlobi yesayensi Bernard Werber ku angaphatheki Time Travel."
Umbhalo kufanele ibe ambalwa ngangokunokwenzeka 'wamanzi' asekela futhi ezihlangene. Ngaphezu kwalokho, zingaphezu kuka-kungaba ukusetshenziswa kwamagama isitsotsi namazwi. Ngobufushane - udadewabo ithalente, kodwa ukukhululwa press undab 'uzekwayo abezindaba, kubalulekile ukwenza kube futhi ithakaseleka abafundi kuyinto wemboni yakho yomsebenzi.
Isigaba sokugcina kumele amele inkampani, ukuhlinzeka ngolwazi mayelana izigaba imisebenzi yayo ukuthuthukiswa, kanye impumelelo enkulu. Lokhu ucezu lombhalo libizwa bekgraunderom futhi iqukethe imininingwane ebalulekile ephawula inkampani.
Ulwazi kungenziwa othathwe izincwajana ezikhethekile noma efanele iyawakha izinhlelo zebhizinisi yenkampani. Ekugcineni kumelwe ucacise web yenkampani indawo, futhi uma kudingekile, ne-URL egcwele abezindaba.
Ekupheleni kufanele uphinde ucacise umuntu contact obhekene umphakathi ubudlelwane noxhumana nabo abantu abaphethe izinqubo ezithile ezichazwe ukukhululwa press, isibonelo, kusho uMnyango ubunjiniyela kanye emisha (uma sikhuluma ezinye uhlobo ukutholakala noma emisha).
Ukhiye imininingwane yokuxhumana ehlinzekwe ku ukukhululwa press lifanele lifake hlangana:
Igama eliphelele yenhlangano (esemthethweni).
Uhlu abantu contact , okubonisa neminyango abakubonisayo.
Ikheli elisemthethweni ehhovisi.
Ifoni ne fax izinombolo ngefomethi ngamazwe nawo wonke amakhodi.
Xhumana inombolo yeselula.
umsebenzi isikhathi yenkampani.
Imigomo amakheli e-mail inkampani.
ISIBONELO ukushicilelwa ku izinsiza Inthanethi
Ukushicilela cindezela yakho ukukhishwa ku-intanethi isiba yokuchitha isizungu kuthandwa, njengoba yobuchwepheshe bama-electronic unyaka ngamunye ezingasho esikhundleni imithombo yolwazi. Abantu abaningi ufune ulwazi olufanele ungaphakathi enkulu World Wide Web. Kufanele ibukeke ukubulawa efanele ukukhululwa press? izinga ISIBONELO Imininingwane izihloko simiswe ngalendlela lelandzelako:
Kanjani ukuheha abezindaba ukunakwa?
Ngu ukushicilela umbiko wephephandaba owakhishwa e kwabezindaba ziphindaphindwe, kufanele kuqondwe ukuthi kwabamele abezindaba nselelo ebaluleke kakhulu ukuheha bese ubamba ukunakwa izilaleli. Futhi uma etholwe kusuka press yenkampani ayinantshisekelo abafundi (noma ababukeli), kuvele ngeke ishicilelwe. Isibonelo owakhishwa abezindaba, okuyinto akanandaba abezindaba - okungukuthi, ulwazi mayelana kuvulwa esitolo "ekhoneni" noma mayelana esenzeka ifemu elaziwayo elincane encane. Lolu lwazi eshicilelwe ophathwa labalulekile eluLwimi amayunithi wesikhangiso.
Nokho, uma wenza ulwazi ezithakazelisayo umfundi noma ulithumele zibheke ohlangothini kwesokudla, amathuba okuthi kokukhishwa ngokucijile. Impumelelo kukhona izixazululo ezintsha. Ngakho, ukukhululwa Tide Amandla eligcizelela imishini ekhethekile eMpumalanga Yurophu, lapho yabakhanga izintatheli kugxilwe kancane.
Ukuthumela ukukhululwa kumele ubhekiswe kuphela abezindaba, okuyinto unesithakazelo ulwazi olunikeziwe. Thumela Isihloko kungcono kakhulu ekuseni ekuqaleni kwesonto ukusebenza. Kuthunyelwe ekupheleni kwesonto izindaba izingozi akusebenzi ngempelasonto hhayi ishicilelwe. Kunengqondo ukuthumela ulwazi izihloko izindaba ezikhethekile namawebhusayithi yenkampani.
Izibonelo emaphepheni abezindaba
Ukushicilelwa e abezindaba kakhulu ngcono ngedumela laleyo nkampani kanye nethonya elihle ku-ukuqashelwa yayo futhi, ngenxa yalokho - impumelelo. Isibonelo ukukhululwa abezindaba cindezela simiswe ngalendlela lelandzelako:
Ngakho, i-press ezithakazelisayo futhi sakheke kahle okungadonsela abezindaba ukunakwa kakhulu ukuqwashisa inkampani, okuyinto ngokuqinisekile nomthelela impumelelo yayo.
Iculo elidala: Party, Abantu, Imali
'Ikhekhe le-Quickie' elingalahleki
Kumiswa Old isimo Russian
Indawo yonke yaseRussia. Indawo ephelele yeRussia neCrimea